Garee Cimaa Gaarz Kiruuks Baranaa: Saalaah, Da Biruuyina, Aguweeroo fi Keen - BBC News Afaan Oromoo
Garee Cimaa Gaarz Kiruuks Baranaa: Saalaah, Da Biruuyina, Aguweeroo fi Keen
14 Caamsa 2018
Image copyright Michael Regan
Pirimeer Liigiin Ingiliiz ji'oota kudhaniin booda xumurameera. Taphattoota ciccimoo Pirimeer Ligichaa torban torban filuun kan beekamu xiinxalaan keenya Gaarz Kiruuks, taphattoota ciccimoo bara dorgommichaa filateera.
Waancaa bara dorgommichaa Maanchistar Siitiin fudhateera. Weestibiroom, Istookiifi Siwaansiin ammoo gara liigii gadaanutti bu'aniiru. Arsanaaliifi Arsen Wengar ammoo waggoota 22n booda gargar bahaniiru.
Eenyufaatu Garee Cimaa Gaarz Kiruuks Baranaa keessa seene?
Deevid Da Hiyaa (Maan Yunaayitid)
Hozee Moorinhoo, Da Hiyaan gara Riyaal Maadrid akka hindeemne hambisuun isaanii milkaa'ina guddaadha.
Gahumsi Da Hiyaan bara dorgommii kanaatti agarsiise bareedaa ture. Haa tahu malee galchii eegaa kanaaf kan madaalu, ittisaa gahumsa qabu midhaassuu hin dandeenye.
Yoo ni yaaddatu taate, Morinhoon Cheelsii wajjin waancaa wayita kaasanitti, Piitar Cheek galchii eegaa ture. Wiiliyaam Gaalaas, Joon Teerii fi Rikaardoo Kaarvaaloo ammoo sarara ittisaarra turan. Da Hiyaaf taphattoonni sarara ittisaa akkasii osoo jiraataniif, carraan Maan Yunaayitid waancaa kaasuuf qabu olaanaa ture.
Da Hiyaan taphoota 18 irratti galchiin osoo irratti hin lakkaa'amiin badhaasa fudhateera.
Wookar, Daank, Otaamendii fi Yaang
Kaayil Wookar (Maan Siitii) - Wayita Peepp Gaardiyoolaan, Wookariin Totanhaam irraa Yuuroo mil 50n bitu shakkeen ture. Haa tahu malee taphasaa jalqabaarratti gahumsa agarsiise ergan ilaale booda, gatiin baasan madaalawaa akka ture hubadhe. Galchii Maan Siitiirraa kubbaa akka dansaatti faccisuun ala, kubbaawwan galchii tahaniis mijeessaa ture.
Liiwii Daank (Biraayitan) - Taphataan kun sadarkaa Chaampiyoonshippiitti wayita taphatu argeera; Pirimeer Liigicharra garuu nama addaa natti tahe. Taphataa Totanhaam kan tahe, Joon Vertookaniin filachuu nan danda'an ture. Haa tahu malee, Biraayitan akka gareetti gahumsa haa qabaatuu haa dhiisuu, gahumsi Daank barana agarsiise, mamii tokko malee akkan filadhu na taasiseera. Kubbaawwan galchii tahuu danda'an, 56 tahan, gooliirraa faccisuun, gahumsasaa agarsiiseera. eera.
Nikoolaas Otaameendii (Maan Siitii) - Gahumsi gurbaa kanaa dhaabbataa hinturre; bara dorgommii kana keessa garuu, gahumsa gaarii nuttii agarsiiseera. Wayita Vinseent Kompaaniin miidhamee turettis, gahumsa ajaa'ibaa agarsiiseera. Taphattoota Liigichaa kamuu caalaa taphattoota gareesaaf kubbaawwan bu'a qabeessa tahan dabarseera.
Ashlii Yaang (Maanchistar Yunaayitid) - Yaang Yunaayitid keessa waan dhumateef natti fakkaatee ture. Gahumsa barana agarsiiseenis, ganna 32tti garee biyyaaleessaaf waamamuu danda'eera.
Da Biruuyin, Farnaandinoo fi Siilvaa
Kevin De Biruun (Maanchister Siitii)- Bara dorgommii kana taphatootan arge keessaa akka taphataa kanaa kan mar'imaan koo na nyaate hin jiru.Mo Saalaan gahumsa olaanaa irratti argamuusaa malee taphataa cimaa bara kanaa tahuu dandaha ture.Egaa kubbi miilaa akkasi dha.Taphataa kana taphatoota cicimoo bara kana keessa galchuurra kan caalu osoo jiraatee gochuun danda'a ture.
Fernandiinoo (Maanchister Siitii)- Kilaawud Makelelee Riyaal Maadrid waliin ,Kaambiyaasoon Intermiilaan waliin injifannoo wal fakkaataa qooddataniiru.Fernaandinoon ammo Manchister Siitii waliin injifannoo wal fakkataa dhamdhameera.
David Silvaa (Maanchister Siitii) - Silvaan Maanchister Siitiif tajaajila guddaa taphataa kennaa jiru dha. Galchiiwwan sagala lakkofsisuun ,kubbawaan 11 immoo taphatoota gareesaa biraaf mijeessee kennuu taphataa danda'edha Silvaan.
Taphatoota Sarara Fuulduraa
Saalaa, Keen fi Aguweeroo
Mohaammad Saalaa (Liiverpuul) - Taphataan lammii Masrii kun biyyasaafis tahe gareesaaf gumaacha inni taasise jechootaan kan ibsamu miti. Bara dorgommii kana gahumsisaa afaan kan nama qabachiisu dha. Deeggartootni Liiverpuul Mo Saalaa ,Mo Saalaa jedhanii yoo faarsan kan nama dinqissisu miti. Galchiiwwan 32 lakkofsisuun bara dorgommii tokkotti rikerdii galchii baay'ee lakkofsisuu jedhus cabsuu dandaheera.
Haarii Keen (Tootenaam) -Kunoo bara dorgommii ajaa'ibsiisaa Haarii Keeniif.Ani taphataan Ingliz kun hiriyyootnisaa biroo kileboota biroo keessaa waancaa yommuu injifatan maaliif akka achi keessa turee callisee ilaalu naaf hin galu.Dorgommii bara kanaa hunda irratti galchiiwwan 42 lakkoofsisuun rikerdii kilebiisaa Cabsuu danda'eera.
Serjiyoo Aguweeroo (Maanchister Siitii) - namootni taphatoota ciicimoo torbaniin ani filu hordofan dinqisiifannaa ani Aguweeroof qabu beeku.Siitiin waancaa bara kanaa akka injifatuuf galchiiwwan Aguweeroo shoora guddaa akka qaban dagatamuu hin qabu .Rikeerdii Maanchister Siitii yomiyyuu galchii hedduu lakkofsisuu harkatti galfateera.
Leenjisaa cimaa bara kanaa
Raafaa'el Beeniteez [Niwukaastil]
Bara dorgommii kana leenjisaa cimaan eenyu jedhamee osoon gaafatamee osoo mataa hin raasiin, Raafaa'el Beeniteez, Shiin Daayikii fi Kiriis Huuton jedheen deebisa. Barnileen liigii Awurooppaa keessa gala, Biraayitan liigicha keessa tura, Niwukaastil immoo qabxii 44 walitti qabachuu danda'a amantii jedhu hin qabun ture.
Beeniteez Niwukaastilin shaampiyoonaa shaampiyoonshiipii gochuu qofa osoo hin taane garee liigichaaf madaalus ijaaru danda'eera. Ijoollotasaa mo'amuuf akka harka hin laanneetti qajeelchee leenjiseera.